Isu diyaarinta diyaarinta qalcadda qalqalloocan ee carruurta | GFUN
1. Da'da kooxda Jannada Fort Naughty Fort waa in la go'aamiyaa. Waa dugsi fiican oo ah 0-6 sano jir, ama kaliya u galida kambuyuutarka.
2. Aagagga Nawaaxiga ee loo yaqaan 'Naughty Fort Paradise' ayaa sidoo kale loo arkaa inay fiican tahay. Haddii ay aad u yar tahay, waxay saameyn kartaa dhibaatooyinka ganacsi ee muddada dheer. Waa in si taxaddar leh loo qiimeeyaa iyada oo loo eegayo gobolka dakhligiisa. Midda kale waa in la maal gashado noocyada qalabka ciyaarta carruurtu ay tahay in la isbarbar dhigo oo la falanqeeyo. Qasriga dhaqameedku wuxuu leeyahay qiimo jaban iyo is dhexgal hoose. Qalcadda cusub ee koronto ee korantada leh waxay leedahay is dhexgalka waalidka-ilmaha, amniga iyo nadaafadda, jawiga furanna waa dareen wanaagsan. Sidoo kale waa muhiim in la doorto goobta isla waqti isku mid ah. Waa lagama maarmaan in la sameeyo qiimeyn ku saabsan rajada ganacsiga sida qulqulka taraafikada ee agagaaraha taraafikada. Waxaa ugu wanaagsan in la xusho suuq weyn oo laga dukaameysto, suuq weyn oo laga dukaameysto, beel weyn, iwm, oo caannimada ayaa go'aamisa daqliga.
3. Sidoo kale waa tallaabo muhiim ah in la xusho soo-saaraha qalabka caruurnimada ee bacaha carruurta. Waxaa ugu wanaagsan maal-gashadeyaasha in ay u aadaan warshadda booqashooyinka garoonka, si ay u arkaan xaaladda howlahooda iyo baaxadda madasha, iyo in ay noqdaan tayada wax soo saarka, sumcadda, iyo gaarsiinta waqtiga iibinta ka dib, iwm., Dhammaantoodna waxay leeyihiin in la sameeyo diyaarin taxane ah.
4.GFUN shirkadani waxay ku takhasustay soo saarista qalabka madadaalada aan awooda lahayn, qalabka madadaalada biyaha, qalabka madadaalada biyaha, qalabka madadaalada carruurta, qalabka madadaalada carruurta ee caruurta, qalabka madadaalada caruurta ee banaanka, qalabka madadaalada banaanka iyo qalabka madadaalada loo habeeyay. Waxaan nahay shirkad qalabka jimicsiga oo dhameystiran, oo macaamiisha siineysa cilmi baaris iyo horumarin, qaabeyn, soosaarid, iibin, rakibaad, adeeg iyo adeegyo loo habeeyey.
GFUN waxay soo dhoweynaysaa macaamiisha inay soo booqdaan oo ay ka wada hadlaan iskaashiga. Waad nala soo xiriiri kartaa waqti kasta haddii aad wax su'aalo ah qabtid.